Xiaomi Mi CC9 Pro wuxuu la imaan doonaa Snapdragon 730G | Androidsis
Iyadoo loo marayo koontada Xiaomi ee Weibo, waxaa si rasmi ah loo xaqiijiyay in My CC9 Pro, kaas oo la sii deyn doono Nofeembar 5, wuxuu u adeegi doonaa hoy uu u noqdo jajabku Snapdragon 730G ka yimid Qualcomm.
Waxaa la ogaa in processor dhexdhexaad ah iyo astaamo aad u fiican ay ku imaan doonaan mobiladan, laakiin ma ahan midka si gaar ah u socda. Durba xogtan cusub, Waan ognahay waxa ay terminaalkani awood u yeelan doono, illaa inta waxqabadka iyo awoodda laga hadlayo.
Snapdragon 730G waa processor-ka ugu awoodda badan Qualcomm's 700 taxane ah. Waxaa lagu dhawaaqay sanadkaan oo awood u leh taleefannada sida Samsung Galaxy A80, Realme X2, Oppo Reno 2 y Oppo K5.
Kaamirooyinka Xiaomi Mi CC9 Pro
Tan iyo markii Mi Note 10 waa nooca caalamiga ah ee Mi CC9 Pro, waxaa sidoo kale ku shaqeyn doona processor-ka Snapdragon 730G. Mi Note 10 wuxuu yimaadaa Nofeembar 14. Dhinaca kale, xogo ka soo baxay maalmo ka hor ayaa sheegay in Mi Note 10 Pro uu yeelan doono processor Snapdragon 855 Plus.
Madaxa shirkadda Xiaomi Lei Jun, oo ahaa qofka kashifay macluumaadka cusub, ayaa sidoo kale la wadaagay a sawir muujinaya gudaha taleefanka si uu noo siiyo eegista nidaamka kamaradda penta, taas oo ah boodhadhkii labaad ee aan dhignay.
Kaamirada kore waa kamaradda 5 MP oo leh 10x zoom hybrid; Kaamiradani waxay leedahay xasilinta muuqaalka muuqaalka. Tan waxaa ku xigta kaamirada sawirka ee 12 MP 50mm. Dareemayaasha 108 MP waa midka soo socda uguna weyn shanta kamaradood, si aan la yaab lahayn; waxay leedahay cabbir ballaaran oo ah 1 / 1.33 ″ pixel, cabbirka f / 1.69, iyo xasilinta muuqaalka muuqaalka. Dareeraha afraad waa kamaradda 20 MP oo aad u ballaadhan waxaana ku xiga kamarad 2 MP oo leh muraayad makro ah oo lagu soo qaado sawirro dhow.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Snapdragon 730G waa SoC loo doortay inuu awood u yeesho Xiaomi Mi CC9 Pro